မတရား ယှဉ်ပြိုင် မှုအတွက် SVolt ကို CATL တရားစွဲ - Pandaily
မတရား ယှဉ်ပြိုင် မှုအတွက် SVolt ကို CATL တရားစွဲ
Feb 14, 2022, 20:47ညနေ 2022/02/14 23:04:35 Pandaily
မ်က္ႏွာ သစ္ သတင္းFujian ပြည်နယ် Ningde Intermediate People ‘s Court သည် Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL) မှ SVolt အား တရားစွဲဆို မှုအား ယခုလ နှောင်းပိုင်းတွင် ကြားနာ ရန်ပြင်ဆင် နေကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် အစီရင်ခံခဲ့သည်။
ဤ အမှု ၌ တရားခံ များတွင် Wuxi Tianhong လုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် Baoding Yixin Consulting Services Co., Ltd. တို့ပါ ၀ င်သည်။
တရားရုံး၏ စီရင်ချက် များစွာ အရ ၂၀၁၈ မှ ၂၀၁၉ အထိ CATL ၀ န်ထမ်း ၉ ဦး သည် Wuxi Tianhong နှင့် Baoding Yixin တို့တွင် CATL ၏ပြ ိုင် ဘက် SVolt ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။ တရားရုံးက ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုကို Svolt နှင့်ဆက်စပ် သူများ အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
CATL တွင်ရှိ စဉ် ၀ န်ထမ်း ကိုး ဦး သည် အင်ဂျင်နီယာ ချုပ် ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အင်ဂျင်နီယာ နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကျွမ်းကျင်သူ များအဖြစ် အမှု ဆောင်ခဲ့သည်။ CATL က အဆိုပါ ကိုး ဦးသည္ ကုမၸဏီက သူ တို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆို ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယြမ္ တစ္ သန္း (ေဒၚလာ ၁၅၇, ၃ ၅၆) နစ္နာေၾကး ေပးရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္ဟု ယူဆ ခဲ့သည္။
CATL နှင့် Svolt နှစ် ဦး စလုံးသည် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များအတွက် ပါဝါ ဘက်ထရီ များထုတ်လုပ် ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကိုရီးယား စျေးကွက် သုတေသန အဖွဲ့ SNE ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ CATL သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင် ဘက်ထရီ လုပ်ငန်း၏ ၃၂. ၆% စျေးကွက် ဝေစု ရရှိခဲ့ပြီး ၅ နှစ် ဆက်တိုက် ကမ္ဘာ ပေါ် တွင်ပထမ နှင့် Svolt & nbsp ၊ စျေးကွက် ဝေစု ၁% သာ ဖြင့် ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခု သို့ဝင် ပါ။
Svolt ယခင်က Great Wall Motors ၏ ဘက်ထရီ ယူနစ် အဖြစ် လူသိများ ခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ်တွင် Svolt Great Wall Motors မှ သီးခြား လွတ်လပ်စွာ စတင် လည်ပတ် ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် မကြာသေးမီက စာရင်းပြုစု ခြင်း ၏ပထမ ခြေလှမ်း ကို ပြီးစီး ခဲ့ပြီး မကြာမီ အရင်းအနှီး ဈေးကွက် သို့ ၀ င်ရောက် ရန်စီစဉ် နေသည်။
SVolt အပြင် CATL သည် ပြိုင်ဘက် များဖြစ်သော Jiangsu Tafil New Energy နှင့် AVIC Lithium Technology Co., Ltd. (CALB) တို့ကို တရားစွဲဆို ခဲ့ပြီး အခြား ပါတီ သည်၎င်း၏ ဘက်ထရီ နည်းပညာ မူပိုင်ခွင့် ကိုချိုးဖောက် သည်ဟု စွပ်စွဲ ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:CATL နှင့် EVE သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် Tesla ဒီဇိုင်း 4680 ဘက်ထရီ ကိုထုတ်လုပ် မည်
CATL နဲ့ Jiangsu Tafil New Energy တို့ရဲ့ အမှုကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ဖြေရှင်း ခဲ့ပြီး Jiangsu Tafil New Energy က CATL ကို လျော် ကြေးငွေ ယွမ် ၂၃. ၃ သန်းကျော် ပေးအပ် ခဲ့ပါတယ်။ CATL နှင့် CALB အကြား မူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာ တရားစွဲဆို မှု ၏ရလဒ်များကို ထုတ်ပြန် ခြင်းမရှိသေးပါ။
တောင်ကိုရီးယား စျေးကွက် သုတေသန အေဂျင်စီ SNE မှ တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော နောက်ဆုံး စာရင်းဇယား များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် CATL သည် ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု ၃၂. ၆% ဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ များကို အကြီးမားဆုံး ပေးသွင်း သူအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည် နေပြီး ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။